Skype na Emmanuel | Martech Zone
M ka na-echeta mgbe a na-eche mbadamba ihe dị ka ntakịrị n'èzí. Agbanyeghị, enwere ọtụtụ ngwa na-agbanwe ihu ọrụ ndị ọrụ ha ma adaba na mbadamba nkume is na-agbanwe. Naanị taa m hapụrụ laptọọpụ m n'ụlọ mgbe m gara Barnes na Noble. M wetara iPad m n'ebe ahụ wee gafere obere ọrụ.
Ọ bụ ezie na enwere m Thunderbolt nwere nnukwu ihuenyo, iPad m ka nwere ọtụtụ ụlọ ọ ga-adaba adaba iji rụọ ọrụ. Ọ bụghị naanị m… digits n'afọ ọzọ. A na-atụ anya na mbadamba nke atọ ga-ahụ uto okpukpu atọ! N'aka nke ọzọ, ire laptọọpụ nwere kpụrụ. Mbadamba ụrọ ahụ abịala!
Nke a bụ ihe mgbasa ozi maka Skype na nso nso a maka iPhone:
Ugbu a Skype dị na iPad. Ajuju ka ajuju ajuju, gini ka nkea ga eme na ahia ekwenti? Smartphone ahịa na-ebili - outpacing PC ahịa… ọ ga-aga n'ihu n'ihi na ogologo? N'eziokwu niile, ọ bụrụ na m nwere ike ịkpọ oku dị mma site na Skype na iPad m n'ofe nnukwu njikọ ikuku (belụsọ ndị na - enye ikuku na - egbochi ya) I achọrọ m ekwentị m ọzọ? You nwere ike ịhụ ahia na ekwentị mkpanaaka gị kpamkpam?
Tags: oru ntinyeNchịkọta mgbasa ozi na-elekọta mmadụGoogle AdWords maka SEONchịkọta Google maka SEONchịkọta Ihe Nlekọta InternetntanetịJiraonye njikwa ịre ahịa
Aug 15, 2011 na 11:00 PM
Atụmatụ ekwentị mkpanaaka ga-abanye na atụmatụ data mkpanaka. N'oge na-adịghị anya, okporo ụzọ olu niile ga-agafe na ntanetị data. Nanị ajụjụ ga-abụ ụdị ihe ị ga - eji maka nkwukọrịta. Achọrọ m iwere laptọọpụ m, mbadamba nkume ma ọ bụ pc m?